को-को छन् एमाले (समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटीमा ? [सूचीसहित]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
को-को छन् एमाले (समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटीमा ? [सूचीसहित]
काठमाडौँ — बुधबार निर्वाचन आयोगमा माधव नेपालले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा ९५ जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् । नयाँ पार्टीको नाम एमाले (समाजवादी) राखेर दिइएको निवेदनमा एमालेमा रहेका ५८ जनाको नाम छ भने बाँकी नयाँ अनुहार हुन् ।
एमाले (समाजवादी) ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको केन्द्रीय कमिटीको सूची :
प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ १८:३१